Sunday October 07, 2018 - 08:23:45 in Wararka by Super Admin
Wadanka Indonesia wararka laga helayo ayaa sheegaya in tirada dadkii ku dhintay dhul gariirki ku dhuftay jaziiradda Sulawesi uu korusii dhaafayo ilaa 1571 qof, sida uu shaaciyay afhayeenka hey'ada maareynta masiibooyinka wadankaasi Ninka lagu ma
Wadanka Indonesia wararka laga helayo ayaa sheegaya in tirada dadkii ku dhintay dhul gariirki ku dhuftay jaziiradda Sulawesi uu korusii dhaafayo ilaa 1571 qof, sida uu shaaciyay afhayeenka hey'ada maareynta masiibooyinka wadankaasi Ninka lagu magacaabo Puro Nogroho.
Nogroho oo warbaahinta la hadlay ayaa faafaahin ka bixiyey halka ay marayaan howlaha gurmad ee ka soconaya magalada Polo iyo Dongala iyo deegaanada ku xeeran intaba waxa uuna sheegay in magaalada Polo dadka ku maqan ilaa iyo hada ay gaarayaan 113 qof.
Dhanka magaalada Dongalo ayuu sheegay in illaa iyo hada lala’yahay dad gaaraya 152 qof, kuwaas oo loo badaniyo inay wali ku hoos jiraan burburka dhismayaasha hoostooda, halka dad kudhow Kun qofna lagu la,yahay deegaanada ku xeeraan magaalooyinka Dongala iyo Polo, kuwaas oo Sunamiga uu si aad ah u saameeyey.
Dadka ku dhaawacmay dhulgariirka iyo Sunaamiga ayuu sheegay afhayeenku in ay gaarayaan 2549 qof, kuwaas oo loo daabulay isbitaalada magaalooyinka waaweyn ee wadanka Indonesia Sida magaalada caasimada ah ee Jakarta, isagoona ka dhawaajiyey in dad gaaraya 70 Kun oo qof ay ku qasbanaadeen inay guryahooda ka barakacaan, kadib markii dhul gariirka iyo Sunaamiga dhulka ay la simeen, halka 191Kun oo qofna ay u baahan yihii gurmad degdeg ah oo lalasoo gaaro.
Howlaha badbaadinta iyo baadi goobka isugu jiro ee kasoconaya deegaanada hoos tago jazeerada Sulawesi ayuu sheegay inay ka qeyb qaadanayaan ciidan dhan 7 Kun oo askari oo kakala socda Police-ka iyo military-ga wadanka Indonesia, kuwaas oo ay sii dheer yihiin Shaqaalaha madaniga ah ee u tababaran gurmadka degdega ah.
Dhul gariirka iyo Sunamiga aan kasoo sheekeynay ayaa wadanka Indonesia ku dhuftay 8 maalin kahor, ilaa iyo hadana waxaa halkaas ka soconaya howlihi loogu gurmanayey dadkii ay waxyeelada xoogani kasoo gaartay, kuwaas oo qaarkood wali ay ku hoos jiraan burburka dhismayaasha hoostooda, waxaana shaki weyn la galinayaa in lasoo helo iyagoo nool oo nafta ay kujirto.
Sawirro: Dibad baxyo ka dhan ah Alsiisi oo gilgilay wadanka Masar.